Nzira Yedu -APICMO cdmo Manufacturers
Iyo imwechete uye tsika inogadzirwa, inogona kubatsira masayendisiti achikurumidza kusimudzira nzira yavo yeR & D mukemikari uye mishonga yemishonga.
APICMO yakapa chete vashandi veICH vane zvakawanda zvepamusoro uye zvebhadhari generic API. Zvose zvinogadzirwa neAppicMO's China factory yekugadzira zvakanyatsoedzwa vasati vatumirwa kuti vaone kuti unhu hupi. Iyi sangano inovimbisa kuti vatengi veAppicMO vanogamuchira michero yemhando panguva dzose.
APICMO yakazvipira kuremekedza rukudzo rwemakemikari yemishonga yemakemikari kuti ave nechokwadi chokuti yese yebasa redu uye zvigadzirwa zvinoshamwaridzana nemamiriro ezvinhu.
APICMO iIOO 9001: 2008 yakavimbiswa uye mabasa ayo ose emabhizimisi ari kunyatsoteerera nemitemo yenyika yehutano hwehutano.
Neine nzvimbo yakakwana yeR & D muShanghai, 5 joint labbs nemayunivhesiti, zvivako zvekugadzira 2 muHenan neJiangsu, uye nzvimbo yakawanda yekutengeserana muChinese, APICMO mashizha makuru ehutano inoisa mukugadzirwa nekugadzirwa kweheterocyclic compounds (zvakadai sepiperidines, piperazines, pyrrolidines ...), spiro compounds, boronic acids, benzenes, amino acids uye peptides, chiral compounds, inhibitors, nucleosides & nucleotides, APIs, nezvimwewo.